Somaliland oo walaac ka muujisay xiriirka DFS!!! - Caasimada Online
Home Warar Somaliland oo walaac ka muujisay xiriirka DFS!!!
Somaliland oo walaac ka muujisay xiriirka DFS!!!
Muqdisho (Caasimada Online) – Maamulka la magac baxay Somaliland ee sheegtay inay ka go’een Jamhuuriyadda Somalia ayaa waxa uu dadaal ugu jiraa sidii loo soo nooleyn lahaa Wada-xaajoodka hakadka galay ee ay lala lahaayeen DFS.
Wasiirka Maamulka Somaliland ugu qaabilsan Arrimaha dibedda, Mohamed Biixi Yoonis oo u waramay Wakaalladda Wararka ee Reuters ayaa sheegay inay ka codsanayaan Ururka Midowga Europe iyo Dowladaha Britain iyo Norway inay dhexdhexaadin ka galaan Wada-hadalkii DF Somalia iyo Maamulka Somaliland.
Nuqul kamid ah warkiisa ayaa waxaa kamid ahaa “Markii ugu horreysay ee aynu wada hadalka bilownay, waxaan haysanay Norway, Britain iyo EU-da, Sidaa darteed, waxaan ka codsanaynaa Dowladahaasi inay mar kale soo galaan, iyo inay arkaan sida ay iyaga wax u dhexdhexaadin”